Ukuhambisa ngenqanawe ngokulula: Amaxabiso okuThumela, ukuTrekhisa umkhondo, ukuleyibhelisha, ukuHlaziywa kwemeko, kunye nezaphulelo kwi-Ecommerce | Martech Zone
Kukho itoni yokuntsokotha kunye ne-ecommerce- ukusuka kulungiso lwentlawulo, ulungiselelo, ukuzaliseka, ukuya kuthumelo kunye nokubuyisa- uninzi lweenkampani lukujongela phantsi njengoko zithatha ishishini lazo kwi-Intanethi. Ukuhambisa, mhlawumbi, yenye yezona zinto zibalulekileyo kuzo naziphi na izinto ezenziwa kwi-Intanethi- kubandakanya iindleko, umhla wokuhanjiswa oqikelelweyo kunye nokulandela umkhondo.
Iindleko ezongezelelekileyo zokuhambisa ngenqanawe, iirhafu, kunye neefizi zazinoxanduva lwesiqingatha sazo zonke iinqwelo zokuthenga ezishiyiweyo. Ukuhanjiswa kancinci kuye kwanoxanduva lwe-18% yeenqwelo zokuthenga ezishiyiweyo.
Ukudibanisa isisombululo sokuhambisa akuthethi nje ukwenza ukuba amava abathengi abe ngcono kwaye kwandise amaxabiso okuguqula, kunokugcina imali njengoko ezi nkqubo zinokufikelela kumaxabiso okuhambisa ongakhange uqonde ukuba akho. ShippingEasy yenye yezo nkqubo.
Ukuhanjiswa kweZibonelelo ezilula
Ukuthumela ngokuLula liqonga lokudibanisa ukuthunyelwa kwi-Intanethi elidityaniswe nayo yonke iqonga le-e-commerce elidumileyo kwaye lisebenza ngobuninzi beenkonzo zokuhambisa- kubandakanya i-UPS, i-FedEx, i-DHL eCommerce, i-DHL Express, i-Endicia, i-USPS yexabiso lesaphulelo, i-USPS CPP vs CBP, kunye ne-USPS Ibhokisi yeRhafu yeNgingqi.
Vula iiRhafu zokuHambisa eziBhetele -Ukufikelela kumaxabiso oRhwebo kunye namaxabiso-amaxabiso aphantsi aqinisekisiweyo okuhambisa ngenqanawe-nokuba kungakanani na. Kwaye, fumana ireyithi ekhethekileyo kunye nezaphulelo zeinshurensi.
Shicilela iilebhile ngokukhawuleza -Printa iilebheli, lawula iiodolo, ukuhambisa ngokuzenzekelayo izinto, ukuhambisa umkhondo, kunye nokwazisa abamkeli- zonke zisetyenziswa ngokulula, iqonga lokuhambisa elisekwe kwilifu.
Ukulandelela kunye nokuBuyisa -Ukulandelela kunye nokubuya ziyinxalenye ebalulekileyo yamava abathengi e-commerce. Ukuhambisa ngokulula kubenza lula kuwe nakubathengi bakho.
Ngokuzenzekelayo ukuhamba komsebenzi -Umatshini ohambisayo onamandla ulungelelanisa ukuhambisa, ukulandela umkhondo, kunye nokubuya ukuze ujike ukugxila kwizinto ezibaluleke ngakumbi-njengokwakha ishishini lakho.
INgxelo ePhambili -Fumana ukuqonda okudingayo ukuze uhlale ngaphezulu kokuhambisa kwakho, abathengi kunye nokulandela umkhondo, konke endaweni enye.
UkuThumela ngokuLula ukuThengisa nge-imeyile
Abathengisi abakwi-Intanethi banokusebenzisa iodolo kunye nokuthumela idatha ukuthumela ngokuzenzekelayo unxibelelwano kubathengi babo, kubandakanya ii-imeyile:
Iinqwelo zokuthenga ezilahliweyo -Buyisa abathengi abaziwayo abashiye izinto kwinqwelo yabo.
Yenza uphononongo lwemveliso -Nxibelelana ngokuthe ngqo nezinto ngokulandelelana kwazo
Iimveliso ezinxulumene no-Upsell - isekwe kwizinto ngokulandelelana kwazo
Nikezela ngeentengiso kunye namakhuphoni - isekwe kwixabiso loku-odola lilonke okanye izinto ezithengiweyo
Phumelela umva abathengi -Isekwe kwimeko yokungasebenzi
Ukongeza, kukho ilayibrari yee-plug-and-play templates ukwenza ukuseta i-snap. Iqela labo lenkonzo yabathengi elincedayo likwanceda ukuseta imigaqo kunye nokwenza isigqibo ngeetemplate, nazo, kubathengisi abanamava okuthengisa nge-imeyile.
Ukuthumela ngokuLula uvelise ukuhlanganiswa kunye ne-3dcart, i-Amazon Prime Shipping, i-Amazon Seller Central, i-BigCommerce, i-ChannelAdvisor, i-eBay, i-Etsy, iMagento, i-Prestashop, Iincwadi ezikhawulezayo, Shopify, Ugcino, Volusion, WooCommerce, Yahoo! Ivenkile, kunye nokunye. Banelayibrari epheleleyo ye-API yokudibanisa amaqonga e-commerce asemthethweni.
Lula ukuThumela kwakho kunye nokuGcina ngokuThumela ngokuLula! Qalisa Uvavanyo lwakho LWEentsuku ezingama-30 ngoku!
Ukubhengezwa: Singamalungu Ukuthumela ngokuLula.
tags: 3dcartinqwelo yokuthenga eshiyiweyoUkuhanjiswa ngenqanawa kweAmazonUmthengisi ophakathi weAmazonBigCommerceChannelAdvisorI-DHL eCommerceDHL ExpressebayEndiciautywalaFedExUnxibelelanisoMagentoukuzenzekela ngokuzenzekelayoPrestaShopIincwadi ezikhawulezayoUkuhambisa ii-API.ukuthunyelwa ngokuzenzekelayoiilebheli zokuhambisaUkubuya ngenqanaweukulandela umkhondoukuhanjiswa kokuhamba komsebenziyenqanawethengakwivenkileukuhambisa umkhondoIUPSI-USPS CBPI-USPS CPPI-USPS CPP vs CBPItheyibhile yamaxabiso eSaphulelo kwi-USPSIbhokisi yeRhafu yeNgingqi ye-USPSivoluswoocommerceYahoo! Iivenkile